स्वतन्त्रै स्वतन्त्रताले भरिपूर्ण देश नेपाल - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
स्वतन्त्रै स्वतन्त्रताले भरिपूर्ण देश नेपाल
विशाल महादेश एशियाको एउटा सानो देश नेपाल हो, मेरो देश । धन्य छु म नेपालमा जन्मन पाएकोमा । मेरो देश आकारमा सानै भएपनि सुन्दर अनि शान्त देश । पाइला पाइलामा स्वतन्त्रता छ मेरो देशमा । मन मनमा शान्ति छ मेरो देशमा । देशमा नियम कानुन छ तर तपाईँ हाम्रो स्वतन्त्रतामा कहिले दखल दिँदैन । यहाँ जसले जे गरे नि पाइन्छ । छुट छ, अनि स्वतन्त्र छ । कति उदार छन्, यहाँका सरकार अनि नेताजीहरु ।
बस, टेक्सी, टेम्पो आदि इत्यादि जुनसुकै पव्लिक, प्राइभेट वा सरकारी यातायातका साधनमा यात्रा गर्दा आम नेपालीले आरामसँग आप्mनो मौलिक हकअधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन यहाँ । यात्रा गर्दागर्दै चकलेट खानुस, अनि चकलेटको खोल फुट्ट गाडीको झ्यालबाट सडकमै फालिदिनुस । पानीको खाली बोटल होस् या प्लाष्टिक झोला, चाउचाउको खोल होस वा बदामको बोक्रा, केराको बोक्रा होस या सुन्तलाको । जे जुनसुकै होस, निर्धक्कले गुडिरहेको गाडीबाट फाले हुन्छ । यतिमात्र हैन, यात्रा गर्दैगर्दा सिंगान, खकार आउन सक्छ र आए पनि नो टेन्सन । यताउता तलमाथि केही हेर्नु पर्दैन । झ्यालवाट फाल्दिए हुन्छ । यसप्रकारका हक अधिकार बाटोमा हिड्दा पनि समानरुपमा प्रयोग गर्न पाइन्छ ।
भाँडाका गाडीहरुले पनि यात्रुका लागि भरपुर सुविधा प्रदान गर्दै आएका छन् मेरो नेपालमा । हिँड्दाहिँड्दै सडकको जुनसुकै ठाउँमा फ्याट्ट हात उचालिदिनुस, गाडी रोकिहाल्छ । बसस्टपको आवश्यकता पनि छैन र साइड लगाएर रोक्नु पनि आवश्यक छैन । बीच सडकमै प्याच्च रोकी हाल्छन् गाडी । अरुलाई के मर्का पर्छ भन्नेतर्फ सोच्न आवश्यक छैन । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? बसको लोड, क्षमता र सिट क्षमताको पनि चिन्तै लिनु पर्दैन । बसभित्र कोचाकोच मात्र हैन ढोकैमा झुण्डिएर यात्रा गर्न पनि स्वतन्त्रता छ । बसको छतमा यात्रा गर्न मन छ भने त्यो पनि मज्जैले पाइन्छ मेरो देशमा । कुनै कुनै बसहरुमा महिलाहरुको लागि भनि २÷४ वटा सिट छुट्याइएका देखिन्छ तर त्यही सिटमा पुरुषले बस्दा पनि केही फरक पर्दैन ।
मोटरबाइक चालकहरुलाई पनि सुविधै सुविधा छ मेरो नेपालमा । एकक्षण के जाम हुन्छ, बाटो, पेटी नै चढाएर जान मिल्छ । अझ उल्टो दिशाबाट पनि कुदाउन मिल्छ । लेन सेनको मतलव राख्नु पर्दैन । पैदल यात्रुलाई पनि बाटो काट्दा जेब्रा क्रसिङ खोजी राख्नु पर्दैन । जतिबेला जहाँबाट बाटो काटे पनि हुन्छ । हुन त पैदल यात्रुहरुका लागि सुविधा होस् भनेरै होला ठाउँठाउँमा जेब्रा क्रसिङ राख्ने कष्ट गरेका पनि छैन सम्बन्धित निकायले । अझ कोही यात्रु चुरोट तान्दै बाटोमा हिँड्दै गर्दा चुरोटको ठुट्टा कता मिल्काउने भन्ने त रत्तिभर नि चिन्ता लिनु पर्दैन । जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ फुत्त मिल्काए हुन्छ ।
अब कुरा गरौं बजार सुविधाको । तपाईं हामी बाटोमा हिँड्दै गर्दा जताततै सडक पेटीमा जुनसुकै बस्तु सजिलै किन्न पाउँछौं । फलफूल तरकारी होस या थानका थान कपडा, जुत्ता चप्पल होस वा सर्ट पाइन्ट, एउटा चुरोट होस वा सुर्तीको पुडिया, पोलेको मकै होस वा पानी पुरी, मःमचा होस वा सेकुवा भनेर साध्यै छैन । मानौं आफूलाई आवश्यक सम्पूर्ण वस्तु सजिलै किन्न पाइन्छ सडकपेटीमा । लौ भन्नुस जापान, अमेरिका, युरोप जस्ता मुलुकहरुमा पाउनु हुन्छ यस्तो सुविधा ?
घरायसी फोहर व्यवस्थापनको लागि पनि अति सजिलो छ मेरो देश । घरमा फोहर जम्मा पार्नुस्, पोका पार्नुस् अनि बिहान सबेरै वा राति अबेर सडक वा कुनै खाली ठाउँ वा अरु कसैको घरआँगनमा सुटुक्क फाल्दिनुस, सकियो । आप्mनो घर सफा भए अरुको जेसुकै होस, केही फरक पर्दैन । दिसापिसाव गर्नलाई पनि कुनै छेकथुन छैन मेरो नेपालमा । बाटोमा हिँड्दै गर्दा जहाँनेर दिसापिसाव लाग्छ, यसो कुनाकाप्चा खाली ठाउँ हेर्ने, आप्mनो गनुपर्ने काम गरी अगाडि लम्किहाल्ने । यस्तो पायक पर्ने ठाउँ नभेटिए कोही छ कि भनि यसो दायाँबायाँ तलमाथि नजर राखी कसैको घरको भित्ता वालमै काम तमाम गरी सुइँकुच्चो थोक्ने । सार्वजनिक शौचालयको कतै आवश्यक छैन ।
मेरो देशमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्दा निर्माण सामग्रीहरु कहाँ राख्ने होला भनि चिन्तै लिनु पर्दैन । निर्माण सामग्रीहरु ढुक्कसित पेटीमा मात्र हैन सडकै ओगट्ने गरी राख्दा पनि हुन्छ । कसैले केही विरोध गरे फलानाले राख्दा हुने मैले नहुने ? भन्नुस, बस सकियो । त्यसैगरी, मोटरसाइकल वर्कशप होस वा अन्य कुनै कलकारखाना जुनसुकै काम पनि सडकपेटी ओगटेरै चलाउन पाइन्छ यहाँ । कुनै रोकटोक छैन । कति आनन्द ! कलकारखाना पनि आवासीय क्षेत्र होस वा जुनसुकै ठाउँ होस, मजाले चलाउन पाइन्छ मरो देशमा । कल कारखानाबाट निस्केका धुलो, धुँवा, ध्वनि आदिले सँगै बसेका छिमेकीलाई कति हानीनोक्सानी होला, मर्का पर्ला भन्नेबारे सोच्न आवश्यकै छैन । बस, मनमा आयो, गरिहाल्यो । स्वतन्त्रता छ ।
मेरो देश नेपालमा मनुष्यका लागि मात्र हैन जनावरहरुको लागि पनि उतिकै स्वतन्त्रता छ । मूल सडकको बीचमा गाईगोरुलाई आराम गर्न छुट छ । बथानका बथान भुस्याहा कुकुरहरुलाई पनि सडकको बिचोबिच भागमा दौडादौड गर्ने छुट छ । यी बाहेक अनगिन्ती स्वतन्त्र छ, जुन सम्झन लायकका छन् मेरो देश नेपालमा ।
यतिका स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि किन सरकार तथा नेताहरुलाई सराप्ने गर्छन् आम नेपालीले, किन त्यसो गर्छन् ? म बुझ्न सक्तिन । तपाईहरु बुभ्mनु हुन्छ कि ? म त नेपालमा जन्मन पाएकोमा अति भाग्यशाली थान्दछु । आजको २÷४ दिनपछि गाईजात्रा पर्व आउँदैछ । तपाईँहरु ठान्नु होला कतै यो विषयवस्तु गाईजात्रे व्यङ्ग्य त हैन भनेर । हैन, यो कतै गाईजात्रे व्यङ्ग्य हैन । यो तपाईं हामी आम नेपालीले दैनिकी रुपमा भोग्दै आएका र देख्दै आएका तीतोसत्य नै हो ।